कथा : 'बदला' - अन्नपूर्ण टाइम्स
कथा : ‘बदला’
२९ श्रावण २०७७ बिहीबार १३:५०
एक्सक्यूज मी, मे आइ सिट हिअर?
नो, केटीले नफर्की जबाफ दिई।
प्रतिप्रश्न गर्यो, ह्वाइ ?
आई हेट मेल। केटिले उसै गरी जवाफ दिई।
खाली सिटमा बस्ने अनुमति नपाएपछि बिवश बसेन। खाली सिटमा नबसेर बिवश आफैले गल्ती गर्यो कि सहि, तर उसले अनौठो अनूभूति गर्यो। त्यसपछि उ जर्बजस्ती बसेन। उसलाई लाग्यो, शिष्टता देखाउन खोज्दा अपमान ? उ उभिरह्यो । उसले यो स्थिति भोगेको पहिलो हो । बस्न दिएको भए के हुने थियो र ? अनपेक्षित स्थितिको सृजना गरिदिई केटिले ।
त्यसपछि तीन जना केटाहरु बसमा चढे । केटीसित तीनै सवाल जवाफ भए । ती केटाहरुको हाल पनि बिवशको जस्तै भयो । केटाहरु बिवशसितै उभिए ।
पछि एकजना महिला चढिन् । केटिले नै हास्दै आफैतिर तानेर बस्न अनुरोध गरिन् ।
केटाहरु कानेखुसी गर्न थाले । बिवश पनि मिसियो त्यसमा । लाग्यो,केटीलाई केटाफोयिबा भएको छ । चारैजना गलललल हासे । सबैले उनीहरु तिरै हेरे । केटीले पनि । बिवशको नजर त्यही केटीमा प¥यो । अस्ति त्यो केटी मिनभवनमा भेटिएकी थिई ।
बिवशलाई सूर्यबिनायक झर्नु थियो । उ झर्यो । संयोग नै थियो कि,त्यो केटि पनी त्यहीं झरि । केटिप्रति झनै कौतुहल चुलियो बिवशको , र बोलायो बिवशले । हेलो सिस्टर !
हाई, केटिले पछाडी फर्किएर प्रतिकृया दिई ।
म बिवश, घर रामेछाप । उसले छोटो परिचय दियो ।
रामेछाप भनेपछि केटीले नजर टठिलो बनाएर सोधी, कहाँ नेर ?
माथि रामेछाप बजार नै हो ।
तपाई श्रेष्ठ हो ? केटीले आश्चर्य मानेर सोधी ।
हो, के रामेछापमा कसैलाई चिन्छौ ?
चिन्दिन । तर चासो लाग्छ। रोमीले केहि टर्रो स्वरमा भनि ।
म रोमी । घर गोरखा । केटीले पनि आफ्नो परिचय दिई।
परिचयसंगै बिवशले आफ्ना बारेमा बतायो । र केटीले पनि ।
रामेछापसित पुरानो लेनदेन छ । धेरै लिनु र थोरै दिनु छ । के हामी एकअर्कोको साथी बन्न सक्छौ ? केटीले प्रस्ताव गरी ।
अवश्य, म तिम्रो लेनदेनमा सहयोग गरौँला । बिवशले भन्यो ।
उनीहरुले मोबाईल नं आदानप्रदान गरे । दिनहरु बित्दै गए । दुबैको भेटघाट बाक्लियो । रोमीले बिवशको मनमा ठाउँ बनाउन थाली । बिवशले रोमीको ।
बिवशले एकदिन रोमीलाई शान्तिनगरको कोठामा बोलाउदै लोकेशन पनि बतायो ।
रोमी बिवशले दिएको लोकेशनको आधारमा शान्तिनगरमा बिबशको कोठाको ढोका अगाडि नै पुगी ।
हेलो बिवश, रोमीले ढोका ढक्ढक्याउदै बोलाई ।
बिवशले ढोका खोल्यो । रोमी रहिछे ।
हाई रोमी ।
लोकेशन बताएकै भरमा आईपुग्यौ ? अचम्म मानेर सोध्यो बिवशले ।
आउनु परेन त ? आफूलाई चाहिएपछि । उसले हास्दै जवाफ दिई ।
त्यस्तो के चाहियो र ?
दुबै जना हासे ।
त्यस्तो केहि हैन बिवश, मात्र तिम्रो सहयोग चाहिएको हो ।
दुबैले आआफ्ना बर्तमानका कुरा गरे । परिचय थप बलियो बनाए ।
बिवश ह्वाईट हाउस कलेजमा अध्यापन गर्छ ।
बाबू नेपाली सेनाका जागिरे थिए । काठमाण्डौ छँदा खराब साथीको संगतमा लागेर गाउँ, घर र परिवार बिर्सिए । आमाले एउटी बहिनीलाई धेरै दुखले हुर्काएर पढाइन् ।
बिवशले गाउँमा बैनीको विवाह भैसकेको र आमा एक्लै भएको कुरा बतायो । रोमीले आफु मामाघरमा बसेर मिनभबन क्याम्पसमा ब्याच्लर पढ्दै गरेको बताई । साझ पर्न लागेको थियो । बिवश खाना बनाउन किचेन छि¥यो । रोमीको नजर एउटा एल्बममा प¥यो । एल्बम पल्टएर हेरी । उसको नजर एउटा भयानक तस्बिरमा प¥यो ।
यो मान्छे यही मान्छे हो, जसको गालामा ठुलो कोठी र निधारमा लाम्चो खत थियो आँखा केहि चिम्सा र आँखिभौ झूसिला थियो । रोमीको दिमागमा बालस्मिृतिहरुले हमला गरे । उनलाई पिडा भयो । मन दुख्यो र त्यो दृष्य ताजा भएर आयो । आजभन्दा १३ बर्ष पहिलाको त्यो बिकराल दिन । रोमी सम्झन पनि चाहान्न ।
बिवशले खाजा लिएर आयो । रोमीले हत्त न पत्त एल्बम राखी र आँखाको आशु लुकाउने कोशिस गरी तर वास्तबिकता लुकेन । बिवशले रोमीको आँखाको भाषा बुझेर सोध्यो, रोमी, तिमीलाई के भयो ?
हैन केहि भएको छैन । बित्नुभएकी आमाको यादले थोरै छोयो । रोमीले जवाफ दिई ।
के मेरो एल्बममा तिम्री आमाको फोटो छ र ? कसरी याद आयो ? थोरै हास्दै चियाको गिलास रोमीलाई दिदै बिवशले भन्यो ।
रोमी, जीवन यस्तै हो । जीवनको यात्रामा आरोह अवरोह आईरहन्छ । मेरो पनि बुबा हुनुहुन्छ तर मरेको बाँचेको थाहा छैन । आजभन्दा पन्ध्र बर्ष पहिले जागिरको शिलशिलामा काठमाण्डौमा छँदा एउटी महिलालाई बलात्कार गरि हत्या गरेको अभियोगमा जागिरबाट निकालिएपछि बिरत्तिएर बिदेश भासिनु भयो । त्यसपछि कता हुुनुहुन्छ केहि थाहा छैन ।
साँझ परिसकेको थियो । रोमीले उठ्दै भनि, बिबश म जान्छु बेलुका मेरो डिउटी जानुछ । रोमी हतारिएको हाउभाउमा उठ्दै भनी ।
बिबशले रोमीको डिउटीको बारेमा सोधेनन् । सायद आबश्यकता ठानेनन् या रोमी हतारमा थिई । रोमी गएपछि बिवशले खाना तयार ग¥यो । रोमी को हो? कसरी भेट भई ? किन भेट भई ? यो सबै प्रश्नहरु उसले छेबैको ऐनालाई सोध्यो। सायद ऐनाले जवाफ दिएछ क्यारे,उ प्रोमिल मुस्कानले ऐनालाई जवाफ दियो । सायद ऐनामा रोमी थिई कि ? जे भएपनि विबशको जीवनमा रोमी बहार बनेर आई र यो बिवशको लागि नौलो थियो । उसले फेरी ऐनालाई सोध्यो, रामेछापका बारेमा बुझेको छु भन्छे, तर केहि भन्दिन ? उसले यसै जिज्ञासा ऐेनालाई सोध्यो तर ऐनाबाट जवाफ पाएन । बरु उल्टै ऐनाले विवशलाई प्रश्नको भाबमा प्रश्न गरिरह्यो ।
तर बिवश र रोमीको जहिले जतिबेला भेट भएपनि आफ्नो बारेमा रोमीले बिवश सामू केहि कुरा कहिल्यै खोलिन ।
काठमाण्डौको बसाई भरी दुबैको भेटघाट र बोलचाल प्रायः दिनदिनै हुनथाल्यो । रामेछाप बजारमा घर र श्रेष्ठ थर किनकिन रोमीलाई बिवशको महत्व बढेर आउन थाल्यो । रोमीले उ मार्फत जीवनको अन्तिम लक्ष्य तय गर्न थाली । लक्ष्य प्राप्तिको माध्याम विबशसितको वैवाहिक समन्ध बन्न पुग्यो ।
रोमी किन बिबशसित समन्ध गाँस्न चाहिरहेकी छ ? विबशसितको पहिलो बोलचालमै उसले आई हेट मेल भनिसकेकी थिई तर फेरी विवाह मेल सितै ? हुन त मन नपर्ने वस्तुहरु नजिकमा नराख्ने भन्ने हैन । मन नपर्ने कुराहरुले पनि जीवनमा धेरै महत्व राख्छ । मान्छेको मूड हो, मन नपरेको बस्तु कतिबेला मन पर्छ थाहा हुँदैन । रोमीले मेलसित कहिल्यै कुनै समन्ध राख्दिन भनेकी हैन, मात्र मेल मन पर्दैन भनेकी हो । बिवशले आफूले यस्तै तर्क गरेर आफूलाई सम्झायो ।
बिवशको मोबाईलका म्यासेजको घन्टी आयो । रोमीले भनि, बिवश नराम्रो मान्दैनौ भने एउटा कुरा भन्छु ।
अँ भन न ।
म तिमीलाई आई लभ यू भन्छु नरिसाउ ल ? तिम्रो जबाफ के छ ? मेरो प्रस्तावलाई स्विकार्छौ भने भोलि बानेश्वरमा भेटौ ।
आस्थाले सजिसजाउ भएको मनमन्दिरमा देउता राख्न मात्र बाँकी थियो बिवशले । त्यसमा पनि देउता आफैँ आएर बस्ने चाहना गरेपछि भक्तले देबताको लागि धेरै भजन गईरहनु नपर्ने कुरा बिवशले बुझ्यो ।
बिवशले जबाफ फर्कायो, स्विकार ।
भोलीपल्ट बिवशले रोमीलाई बानेश्बरमा भेट्यो ।
हो बिवश, मलाई मेरो जीवनको अन्तिम मिसन पुरा गर्नु छ । विवाह नै मेरो जीवनको अन्तिम लक्ष्य बन्यो । मेरो जीवनको लागि तिमी उपयुक्त छौ । म अब मामाघरमा धेरै बस्न सक्तिन । मेरो परिवारको एउटा ठूलो रिण चुक्ता गर्नुछ । के तिमी मलाई साथ दिन्छौ ?
रोमीले आफूप्रति देखाएको व्यवहार बिवशलाई अनपेक्षित लाग्यो । विबश र रोमीबिचमा मायाप्रतिको बारेमा यो भन्दा पहिला हाँसो ठट्टा नभएको हैन । तर ति सबै फाल्तू भए । रोमीको अनपेक्षित निर्णयले बिवश रनभूल्लमा प¥यो । बिवशले आफुलाई सोध्यो, रोमीको जीवनमा त्यस्तो कुन मोड आईपुग्यो र उ बिहे गर्न बाध्य भई ? यो पनि उसको ठट्टा त हैन ? हुन त रोमीको यो निर्णय विबशको लागि यो बेला सत्य नै भएपनि अनपेक्षित छ र ठट्टा नै भएपनि अनपेक्षित नै हुनेछ । बिवशले फेरी आफैँलाई सोध्यो, बानेश्वरको फुटपाथमा एकमूठा साग किन्दा त बिचार गर्नुपर्छ । यो त एकले अर्कोसित जीवन बिताउँने कुरा हो ।
हुन त बिवशले रोमीलाई भित्रभित्र चाहन थालेको थियो । बिवश हिँड्ने तर्खरमा थियो । रोमीले भनी, जीवन बाँच्नको लागि एक्लो हुँदा समयसित सम्झौता गर्नुपर्छ । तर बिहेपछि दुईजनामा सम्झौता गर्नुपर्छ । तर मलाई लाग्छ, हामीमा कुनै सम्झौता हुनेछैन । र गर्नु पनि पर्दैन । हामीले समझदारीमा जीवन जिउनुपर्छ ।
बिवश केहि बोलेन । उसलाई पनि रोमी भित्रभित्रै मन पर्दै आई । घरमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ । साथी त हुन्छ नि । उसले मनमनै सोच्यो । लामो मौनता पछि उ बोल्यो,
घरमा मेरी एउटी आमा हुनुहुन्छ, उहाँसित सल्लाह गर्नुपर्छ । म भोलि घर गएर यतैलिएर आउँछु ।
रोमीले बिबशको कुरालाई खासै ध्यान त दिईन तर चासो नदिएरै पनि हुन्छ भन्ने भावमा मुन्टो हलाउँदै भनि–
हुन्छ । लिएर आउ तर हामी छिटै विवाह गर्नुपर्छ ।
बिवश भोलिपल्ट घर गयो । घरमा बैनीको बिहे गरेपछि आमा एक्लै हुनुहुन्छ । छोराको बिवाह गरिदिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने आमाको चाहना पहिलेकै हो ।
बिवशले आमालाई आफ्नो बिहे गर्ने कुरा बतायो । केटी आफैँले हेरेको कुरो ग¥यो । बिवशको कुरा सुनेर आमाले भन्नुभयो, यो हाम्रो समय हैन । तँ आफैँ पढेको र बुझेको छस् । राम्रो रुप ब्यबहार र संकार भएको केटी हेरेको होलास् । जीवन बिताउँने तैले हो । राम्रो होस् । म के भनौ । तैले गरेको निर्णयमा म बिरोध गर्दिन ।
बिवाह काठमाण्डौमा नै हुने भयो । बिवशले आमालाई पनि काठमाण्डौमा ल्यायो । डेरामा बसेर मन्दिरमा बिहे हुने भयो । बिवशले ऋण गरेर रोमीका लागि गहना किन्यो । उसो त रोमीलाई गहनाको त्यति ठूलो शोख हैन तरपनि किनिदिनै प¥यो । बिवशले रोमीलाई डेरामा भित्रायो । रोमीलाई बेहुलीको पहिरनमा देख्दा बिबशलाई रमाईलो लाग्यो । पल्लो कोठामा आमा सुत्नुहुन्छ । बेलुका बिवशलाई रोमीको समिपमा जानलाई अप्ठ्यारो महशूस ग¥यो । सूत्रपनि जानेन । न त रोमीले नै सूत्र सिकाईन् । न त बिवशले नै जान्यो । खै किनकिन बिवशलाई रोमीको समीप जान अप्ठेरो लाग्यो । जानेन । समीप नजाँदा बिवशको पुरुषत्व गुम्ला भन्ने डर ।
सूत्र पहिल्याउँदै विबश रोमीको खाटमा गयो । रोमी पछि सरी । विबशलाई शंकाले जलायो । उसले मनलाई सोध्यो, हैन किन यस्तो प्रतिकृया दिई रोमीले ? सुरुमा लोकाचार त देखाउँनै प¥यो नि । कहाँ झ्याम्म हाम फाल्छन् त केटासित ? उसले सोच्यो ।
ऊ आँट गरेर अगाडी बढ्यो । रोमी पछि हटी र भनी, आई हेट मेल ।
यो शब्द विबशको कानमा भिर बनेर पस्यो । यसको उसले अपेक्षा गरेको थिएन । छाँगाबाट खसेको महशूस ग¥यो । उसलाई रोमीउपर शंका ग¥यो,रोमी समलिंगि त हैन ?
आई हेट मेल । यहि शब्द उसले पहिलो पटक गाडीमा सुनेको थियो । तर त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिएको थिएन । अविवाहित केटीले यसो भन्नुलाई नौलो ठानेन । अहिले रोमीको मुखबाट यहि शब्द सुनेपछि उनको समिप जाने र हिसाब नमिल्ने थप शुत्र खोजेन । उ मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै अर्को खाटमा गएर पल्टियो ।
आई हेट मेलको प्रभाव उनीहरुको जीवनमा लामो समयसम्म रह्यो । दुबैमा खटपट सुरुभए पनि रोमीले सासुसित राम्रै व्यबहार गर्थी या भनौ, फिमेलसित राम्रै व्यबहार गर्थी ।
बिबशकी आमालाई शहरी हावा पानी, रहनसहन र खानपिन मिलेन । छोरा बुहारी जागिरमा जाँदा दिनभरी एक्लै बस्दा दिक्दार लाग्यो । एकदिन छोराबुहारी जागिरमा गएको बेला आमा कोठाको बरन्डामा बेहेश भएर लडिछिन् । छिमेकीले छोरा बुहारीलाई बोलाएर हस्पिटल लगिदिए । डाक्टरले आमाको प्रेशर बढेकोले जुनबेला पनि मुटुलाई असर गर्ने हुँदा एकजनाले घरमै बसेर हेरविचार गर्नुपर्ने बताए । दुबैको जागिर थियो । समस्या दुबैमा थियो । आमाको हेरबिचार गर्न बिवशले रोमीसित सल्लाह गर्ने बिचार ग¥यो । रोमी रुममा पढिरहेकि थिई । विबश खाटको छेउका गएर बस्न खोज्दै थियो ।
विबश, आई हेट मेल बिवश । तिमी तल बस ।
बिबशले रोमीको आज्ञा पालन गर्दै तल बसेर भन्यो, रोमी, आमा विरामी हुनुहुन्छ । तिमीलाई पनि थाहा छ कि आमालाई डाक्टरले एक्लै नछोड्नु भनेको छ । मैले भन्दा तिमीलाई घरको व्यबहार थाहा छ । आमाको लागि भएपनि तिमीले जागिर छोड ।
विबशको कुरा सकिन नपाउँदै रोमी चिच्याई । विबश,तिमी यो के भन्दैछौ । म तिम्री आमाको लागि पढाई र जागिर लिलाम गरु ?
बिवशले पहिलो पटक संझौता बिनाको विवाहको झड्का यहाँनेर मशसुस ग¥यो । विना सम्झौता विवाह गर्नेकुरा रोमीले बानेश्वरमा गरेकी थिई ।
मेरो भबिश्य तहसनहस नबनाउ । यो हुदैन । हुनै सक्दैन । तिम्री आमाको लागि तिमी जागिर छाड । के पुरुषले घरको काम गर्न हुदैन ? महिलाले मात्र गर्नुपर्ने हो ? दुबैमा बिवाहको दिनदेखि खटपट सुरु भएपनि रोमीबाट यतिसम्मको ब्यवहारको आशा गरेको थिएन बिवशले । रोमी यसरी चिच्याएकी पनि थिईन । रोमीसितको असमझदारीले बिवश जागिर छोड्न बाध्य भयो । उसले आमाको हेरबिचारमा घरमै समय बिताउन थाल्यो । समयहरु यसरी नै गुज्रिन थाल्यो । लोग्नेस्वास्नीको बिचमा नाताको मात्र समन्ध रह्यो । माया र भाबनामा हैन । कोठामै बसिरहने भएर छोराबुहारीको ब्यवहारिक समन्धको बारेमा आमालाई खासै केहि थाहा भएन । रोमी बिहानै कलेज जान्थी । आएर बिवशले पकाएको खाना खान्थी ।
एकदिन रोमीले एकबाटा कपडा बिवशसामू ल्याएर दिदै भनी, भोलिदेखि मेरो परिक्षा छ, पढ्नु छ, तिमी यो कपडा धोउ र खाजा तयार गर । मलाई सारै भोक पनि लागेको छ ।
हुन्छ रोमी । उसले यतिमात्र जवाफ दिने आँट ग¥यो । औपचारिकता देखाउँदै बढि बोल्ने स्थितिमा थिएन बिवश । बिवश कपडा धुन थाल्यो बाटामा सबैखाले सादा र रंगिन कपडाहरु थिए । लुगा धुँदै गर्दा बाटाको पानीमा रातो रंग देखिदै आयो । बाटामा एउटा भित्रि बस्त्र पनि थियो । बिवशले बुझ्यो, रोमी मिन्स भएकी रैछ ।
रोमीले जस्तो व्यबहार गरेपनि रोमीप्रति बिवशको मायाँ र भरोसा थियो । रोमीसितको सम्बन्धलाई जोडेर उसले भबिश्यको सुन्दर कल्पना गर्न छोडेन । सायद बिवशका लागि यो कल्पना नै मन बुझाउने एउटा बिकल्प र समय बिताउने एउटा बाटो हुन्थ्यो । समय यसैगरि बिते बिवशका । लुगा धुनेदेखि बेलुका सुत्ने बेलामा रोमीको टेबलमा पानी समेत लगेर बिवश राखिदिन्थ्यो । बिवशले यि कामहरु गरिरह्यो । रोमी ढिलो आउँदा रोमीको लागि खाना कुरेर बस्थ्यो । रोमी आवस् र मिठो मुस्कानको साथ आफ्नो कपाल सुम्सुम्याउँदै – बिवश, तिमीलाई भोक लाग्यो होला है ? आमालाई खाना खान दिएर तिमीले पनि खाएको भए भै हाल्थ्यो नि । मलाई किन कुरेर बस्नुपथ्र्यो ? अँहँ रोमी रुममा आएर कहिल्यै यसो भनि न । यो चाहाना बिवशको लागि जहिल्यै कल्पना मात्र भयो ।
रोमी आउँने बाटोमा आँखा डुलाउँथ्यो । मनमा कताकता बिवश रोमीको मिठो मुस्कान र मधुर बोलीको आशा राख्दैथ्यो । तर त्यो कुनैदिन सम्भब भएन ।
रोमी बेलुका पनि हिड्थी । कता जान्थी बिवशले थाहा पाउँदैनथ्यो । एकदिन रोमी बेलुका छ बजेतिर निस्की । बिवशले उ गएको बाटोतिर हे¥यो । बाहिर सडक छेउमा रोकिराखेको कारमा चडेर उ हुँईकिई । बिबश झ्यालको पर्दा लगाएर खाटमा पल्टिएर रोयो तर रोमीको गतिबिधीको बारेमा रोमीलाई सोधेर स्पष्ट हुने आँट बिबशले गरेन । सिर्फ आज्ञा पालक बन्यो बिबश ।
त्यस दिनपनि बिबशले खाना कुरेर बस्यो । रोमी मध्यरात १२ बजे उहि कारमा आई । कार सडक छेउमा सडक बत्तीको छेउमा रोकियो । कार भित्रबाट एउटा टाउको बाहिर देखाप¥यो र रोमीको गालामा किस ग¥यो घरको झ्यालबाट यो बेला बिवशले सडकछेउको बत्तीले रोमीको गाला टल्किएको दृष्य सुन्दर देख्यो । यो दृष्य देखेर र रोमीको ब्यबहार देखेर बिवशको मुटु फुट्ला जस्तो भयो
। त्यसपछि कार हुईकियो । रोमी हल्लीदै रुममा आई । उ रक्सी पिएर बेहाल थिई । बर्बराउँदै खाटमा लडी ।
बिबशले रोमीको बाहिरी कपडा खोलेर सितल गरायो । रोमीको हालत देखेर बिबश आवाज नआउँने गरि रोयो । रुन त उसलाई डाँको छाडेर रुन मन लागेको थियो । तर सकेन किनकी उसलाई आफूमा भएको बचेखुचेका पुरुषत्व को डर थियो । उसले यतिबेला आफ्नो भबिश्यलाई हे¥यो । डामाडोल र अँध्यारो देख्यो ।
खाटमा बेबारिस तरिकाले लडीरहेकी रोमीलाई बिबशले बिहे पहिलाको नजरले हे¥यो । उसले खाटको छेउमा बसेर आफु पूर्व स्मिृतिमा डुव्यो ।
रोमी कन्चन थिई । रोमीलाई चुम्यो । छाम्यो । धित नमरुन्जेल अँगालोमा बे¥यो । रहरहरु छताछुल्ल पारेर पोखिदियो ।
यहि कल्पिदै छेउमा पुगेको बिबशको नाकमा रक्सिको दुर्गन्ध नराम्रोसित ठोक्कीयो । मनका काल्पनिक रहरहरुलाई छाडेर कहालीलाग्दो बर्तमानमा फर्कियो ।
मध्यान्हपछि रोमी होशमा आई । आमा रुममै हुनुहुन्थ्यो । उहाँबाट रोमीको हालत लुकाउँन चाहान्थो बिबश, तर सकेन । आमाले सबैकुरा देख्नुभयो तर केहि भन्नु भएन ।
जागिर छाडेपछि बिबशलाई पैसाको ठुलो खाँचो भएर आमाको लागि औषधी किन्ने पैसा समेत भएन । रामी नशाबाट उठेपछि रोमीको बारेमा खासै केहि सोधेन । आमाको औषधी सकिएको थियो । उसले रोमी सामू भन्यो,
रोमी,आमाको औषधी सकिएछ, आमालाई औषधी किन्न पैसा देउ न ।
बिबशको बिन्ति खस्न नपाउँदै रोमीले जवाफ फर्काई , तिमीले राख्न दिएका छौ र ? कताबाट आउँछ पैसा ? तिमीले मलाई कमाएर राख्न दिएका छौ ?
उ केहि बोलेन । माझिसकेको भाँडा लिएर रुम पस्यो । एकछिन पछि आदेश दिदै रोमीले भनी, बिवश, नुहाउनलाई कपडा र सबुन ल्याउ । मेरो नाईट ड्यूटी जानेबेला भयो ।
बिवश र रोमीबिच यसैगरी बिते एकबर्ष । बिवाह पछिको जीवनमा केहि परिबर्तन भएन बिबशको । बरु रोमी धेरै परिबर्तन भएकी छ । उसले शुखद दाम्पत्य जीवनको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएन । बिबशसित पनि मायाप्रेम, चाहना भावना र रहरहरु थियो । तर उसले को सित शेयर गरोस् ? रोमीले उसको माया बुझ्न सकिन ।
एकदिन बिवश कोठामा रोएर बसिरहेको थियो। रोमीले देखी । र, सोधी, के भयो मिस्टर ? पुरुषले यसरी रुनुहुदैन । के पुरुषको पनि आँशु हुन्छ ? के पुरुषको पनि आँशु आउँछ ? पुरुषको पनि मन र मुटु हुन्छ ? खाटमा बस्दै रोमीले भनी, बिवशले रोमीको लागि खाट छोडिदिदै पल्लो खाटमा गएर बस्यो ।
रोमीले भनी, तिम्रो आँशु देखेर मलाई भयंकर त्यो दिनको याद आयो । जुनबेला म सानै थिएँ मेरी आमा एकमहिनाकी सुत्केरी हुनुुहुन्थ्यो । बुबालाई आदर गर्नुहुन्थ्यो । मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । तर बाबा बिनाकारण आमालाई मानसिक र शरीरिक यातना दिनुहुन्थ्यो । बाबासितै अफिसबाट,एकजना मान्छे आउँथ्यो । सुरुमा हामीसित राम्रै व्यबहार ग¥यो । एकदिन दुबैजना रक्सी पिएर आए । आमाले खाना पस्केर आदरसाथ दिनुभयो । तर अचम्म भयो दुबैले आमालाई अनैतिक र उत्ताउला बोली र व्यबहारहरु देखाए । सुरुमा आमाले सम्झाउने कोशिष गर्नुभयो तर सक्नुभएन । दुवैले आमालाई हातपात गरे । मलाई पनि बुबाले समात्ने कोशिष गर्दैथियो । तर म भागेँ । उनीहरुले कोठाको ढोका लगाए । मैले ढोकाको चेपबाट हेरेँ । दुबैले आमालाई पालैपालो बलात्कार गरे । आमा धेरै चिच्याउनु भयो । क्रमसः आमाको आबाज बन्द हुँदैगयो । उनीहरुले भाईलाई पनि भित्तामा झटारो हानेर मारे । त्यो दृष्य देखेर म मामााघर गएँ । मामालाई जानकारी गराएपछि मामा आउनु भयो तर आमा र भाई जिउँदा थिएनन् । त्यहि दिनदेखि म मामाघरमा बस्छु ।
रोमीले थपी, बिवश, यौनको मामलामा पुरुषहरु कामूक र राक्षस हुन्छन् । समाजमा महिलामाथि जतिपनि दमन, भेदभाव र हिंसा हुन्छ, धेरै यौनको कारणले हुन्छ । महिलालाई यौनको नजरले हेरिन्छ । महिलाको शारीरिक संरचना स्वयं महिलाको लागि अभिषाप बन्छ । हो, शारीरिक रुपमा महिला, पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छन् । पुरुषले त्यही कमजोरीको फाईदा उठाएर महिलामाथि शोषण गरिरह्यो । पुरुषले महिलालाई कहिल्यै सोझो नजरले हेरेन । महिलालाई ठाडो नजरले हेर्न दिइएन । हेरेपनि पुरुषले सहन सकेनन् । अनेक उपमा दिईरहे । यो प्रबृति अझै छ पुरुषहरुमा । महिलाहरु घुम्टोभित्र बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता पुरुषमा देखियो । जबसम्म पुरुष र महिला बराबरी भन्ने चेतना पुरुष प्रधान समाजमा आउदैन, तबसम्म महिलाको हीतमा जस्तै कार्यक्रम ल्याएपनि काम छैन । तिमीले जस्तै मेरी आमाले पनि धेरै पढ्नुभएको थियो । तर बुबाको पियन जागिरका लागि आमाले आफ्नो योग्यता क्षमताको आफैँले अबमूल्यन गर्न बाध्य हुनुभयो । र घर गृहस्थिमा लाग्नुभयो । त्यो पनि ठीकै थियो । तर आमालाई बुबाले व्यबहारिक जीवनमा दमन गरेर राख्नुभयो । हुँदाहुँदा परपुरुषसित लागेर आफ्नो श्रीमतीलाई बलात्कार गरे मेरो बुबाले ।
रोमीको कुरा सुनेर बिवश बिक्षिप्त भयो । रोमी बाबुसित मिलेर बलात्कार गर्ने अर्को अपराधी भेटियो त ? बिबशले रोमीलाई सोध्यो ।
भेटियो, तर पहूचबालाको मान्छे परेछ छोडिदियो । रोमीले एल्बमबाट पुरानो फोटो झिक्दै भनी, भन त बिबश, यो मान्छे चिन्छौ ?
फोटो हेरेपछि उसले पत्याउन सकेन । उसको नजरमा कालो बदल लाग्यो । उ केहि बोलेन । रोमीले भनी,भन बिबश यो जंगकुमार श्रेष्ठ भनेको को हो ? जब तिमीले आफ्नो ठेगानामा रामेछाप बतायौ,लाग्यो कि, म अपराधी भेट्ने लक्षमा पुग्न सक्छु । तिम्रो एल्बममा यो फोटो देखेपछि मेरो लक्ष्यको बाटो फराकिलो भयो । भन न यो अपराधी को हो ?
रोमीले अपराधी को हो भनेर पत्ता लगाउन राखेको तिब्र जिज्ञासालाई बिबशले उक्त अपराधी स्बयं आफ्नो अनुहारमा देख्यो । त्यो अपराधीको सक्कल अनुहार तिम्रो अनुहार सित मिल्छ भनेर भन्छे कि भन्ने डर विबशलाई लाग्यो ।
रोमीले बिबाह पहिला आफ्नी आमाको बलत्कारी अपराधी पत्ता लगाउनको लागि बिबशले लिएको बाचादेखि बिबशले भाग्ने कोषिश गरेन । अपराधी पत्ता लगाएर उसको दन्किरहेको मनलाई शान्त पार्ने बिचार ग¥यो बिबशले । तर अपराधी आफ्नै बाबु थियो भनेर कसरी भनोस् बिबशले ?
लामो समय रोमीले देखाएको फोटोबाट आँखा हटाएर मु्न्टो निहू¥याएर भन्यो, रोमी यो मेरो बाबु हो ।
बिबशले यो मेरो बाबु हो भन्दा रोमीलाई अचम्म लागेन । किनकी यो सब चिने बुझेर नै रोमीले बिबशसित विवाह गरेकी हो । र विवाह गर्नुृको उद्देश्य पनी बिबशमा भएको पुरुषत्बको अपमान गरेर आफ्नी आमालाई न्याय दिनुहो । किनकी बिबशको बाबुले नै आफ्नो बाबुसित लागेर आफ्नो पुरुषत्वको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी आमाको बलात्कार गरि हत्या गरेको थियो ।
केहि क्षणको मौनता भंग गर्दै रोमीले भनी, मैले तिमीसित बिवाह गर्नुको रहर र लक्ष्य थिएन । तर जे थियो, त्यो पुरा भयो । मेरी आमालाई यो हालतमा पु¥याउने र महिलाले दबिएर बाँच्नुपर्ने स्थितिको आभाष तिमीलाई एकबर्ष सम्म दिलाएँ । सक्छौ भने आफू दबिएर बस्दाको अनुभव संसारलाई सुनाऊ ताकि सबै पुरुषलाई ज्ञान आओस् । हेर बिबश, म स्वतन्त्र छु । रहनेछु । म पुरुषलाई उसको क्षमता हेरी उसको मुल्यांकन र व्यवहार गर्छु । जसले नारीको सहि मुल्यांकन, सद्ब्यवहार, आदर र ईज्यत गर्छ, उहि नै पुरुष हो । उसैलाई पुरुष मान्छु ।
माफ गर बिबश तिमीसित विवाह गर्नु मेरो कुनै उद्देश्य थिएन भन्दै गोजीबाट एउटा पेपर निकाल्दै भनी, बिबश, म तिमीसित समन्धविच्छेद गर्न चाहान्छु । साँच्चै हो, एकबर्ष सम्मको मेरो ब्यवहारले तिमीलाई पनि नराम्रो बनायो । तिम्रो आडम्बरी पुरुषत्वको कदर गर्ने कुनै महिला पायौ भने विवाह गर । तर म मेरो योग्यता र क्षमतालाई दबाएर कुनै पुरुषको दासी भै बस्न सक्तिन र म कसैलाई मेरो दासी बनाउन पनि चाहान्न । अबदेखि तिम्रो र मेरो लेनदेन पुरा भयो ।
बिबशले पेपरमा सहि गरिदियो । उसलाई यो क्षणले भाउन्न गरायो । बाउको अपराधको सजायँले उसलाई ग्लानी भयो । रोमीबाट पाएको असमान व्यबहार र विवाहको ऋणले बिबशलाई तत्कालै जलायो । उसको धरातल भासियो । बिबश त्यहाँबाट उठेर हिँड्यो ।
धेरैबेर सम्म बिबश नआएपछि रोमीले बाहिर निस्किएर यताउता हेरी । बिबश कतै थिएन ।
एकछिन पर सम्म बिबश नआएपछि रोमीले बाहिर निस्किएर यताउता हेरी । बिबश कतै थिएन ।
एकछिन पछि यो सबै घटनाबाट अनभिज्ञ भएकी आमा आफ्नो कोठाबाट उठेर बाथरुम छिरिन् । त्यहाँको दृष्य देखेर आमा ‘मेरो छोरा’ भन्दै चिच्याईन् र भुँइँमा पछारिइन् । बिबश बाथरुमको सिलिङमा रहेको फ्यान झुण्ड्याउने हुकमा डोरीको पासो लगाएर झुन्डिएको थियो । आमा पछि ब्यूझिएर अत्तालिदै रोमीलाई बोलाउन पल्लो कोठामा गईन् तर त्यहाँ रोमी थिई न।
दिपक न्यौपाने ‘अश्रुन्जली’